juin 2021 – Madatopinfo
Amin’izao ankatoky ny fankalazana ny Fetim-pirenena izao dia nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny eo anivon’ny EMMO-NAT teny amin’ny Toby Ratsimandrava omaly 23 Jona mikasika ny fandaminana isan-tokony ny
Niainga avy amin’ny fakan-kevitr’ireo manana fahasembanana ny lohahevitra amina fampiofanana toy izao. Hoy i Holy na Holiniaina Rakotoarisoa, Filoha mpanorina sady mpitarika ny ONG Merci, raha nitafa tamin’ny Mpanao gazetinay
Nanatanteraka fialamboly ho an’ny ankizy miisa 21 ny association enfants Antananarivo, AEA sy ny ONG Merci. Ny sabotsy 19 Jiona teo no natao izany teo amin’ny birao fiasan’ny AEA, eny
Manerana an’i Afrika no hanatanterahana ny fifaninana tetikasa izay karakarain’ny Orange nampitondraina ny anarana hoe: Prix Orange de l’Entrepreneur Social
Fototra iray manamora ny fidiran’ny ankizy ao amin’ny kilasy taona voalohany (CP1) ny fandalovana amin’ny akany fibeazana na « préscolaire ». Ankehitriny,
Efa ho ELD na “employé à longue durée” ireo mpiasa 36 ECD na « employé à courte durée » an’ny Ministeran’ny
« Beyond all you are mine », fanambarana feno hafaliana manoloana ny ho avy manjavozavo. Hatraiza ny fetra! Hanao ahoana ny ampitso »,